Daybook - Diary, ဂျာနယ်, မှတ်စု | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » Daybook - Diary, ဂျာနယ်, မှတ်စု
Daybook - Diary, ဂျာနယ်, APK ကိုမှတ်ချက်
Daybook တစ်ဦးကိုအခမဲ့, ပတ်စ်ကုတ်-protected ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒိုင်ယာရီ, ဂျာနယ်နှင့်မှတ်စုများ app ကို Android အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Daybook ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် တစျနေ့တလျှောက်လုံးစံချိန်လှုပ်ရှားမှုများ, အတွေ့အကြုံများ, အတှေးအများနှင့်အတွေးအခေါ်များ။ ဒါဟာသင်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအတွက်အတိတ်ကာလမှသင်၏ created ဒိုင်ယာရီ / ဂျာနယ် entries တွေကိုသို့မဟုတ်မှတ်စုစုစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
• မှတ်ဉာဏ်အကာအကွယ်: Daybook အလွယ်ကူဆုံးလမ်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကဒိုင်ယာရီ, စာအုပ် ', ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုရေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးကစြီထုံးစံ၌အမှတ်တရများမှတ်တမ်းတင်ရန်ကူညီပေးသည်။
• Secure AND passcode Protected: သော့ခတ်နှင့်အတူဂျာနယ်ပုဂ္ဂလိကအဆိုပါနို့ထွက်ပစ္စည်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်။ လုံခြုံရေး Code ကိုပုဂ္ဂလိကသင့်ရဲ့ entries တွေကိုစောင့်ရှောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ app ထဲတွင်သိုလှောင်ထားသောဒေတာများလုံလုံခြုံခြုံကာကွယ်ထားသည်
• လွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှု: ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ JOURNAL, သာလွန်ဒိုင်ယာရီ / ဂျာနယ်အတှေ့အကွုံနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် tracker လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုပါပဲ။ ရှုပ်ထွေးဘယ်အရာကမှဘာမှနေ့စဉ်အရေးအသား၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဒိုင်ယာရီ complicated- ။ ရုံဂျာနယ်မှတ်စုစာအုပ်ရေးသားကယ်တင်! ရိုးရှင်းသောဒိုင်ယာရီပြက္ခဒိန်မြင်ကွင်းအလွယ်တကူယခင်ကရေးထားလျက်ရှိ၏ဒိုင်ယာရီမှသွားလာရန်ကူညီပေးသည်။
• : ON တစ်ကြိမ်ကြင်ဖော်မဲ့ SIGN အဘယ်ကြောင့်သေးသည်အခြားရဲ့ login အသေးစိတ်ကိုမှတ်မိဖို့ရှိခြင်းနှောင့်အယှက်? ဂျီမေးလ် / facebook ကို အသုံးပြု. အတွက်တစ်ကြိမ်သင်္ကေတပြ / device ကိုနှုန်းကိုအီးမေးလ်အိုင်ဒီစကားဝှက်နဲ့တစ်ဂျာနယ်ဒိုင်ယာရီဖြစ်ဖို့ကနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ app ထဲမှာထည့်သွင်း notepad ဒိုင်ယာရီနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာပဲပတ်စ်ကုတ်နှင့်အတူဝင်ရောက်လိမ့်မည်။
• AUTO အချက်အလက်အရန်ကူးကိုအခမဲ့အကြောင်းအရာသိုလှောင်မှု: / ဓါတ်ပုံနေ့စဉ်မှတ်စုဂျာနယ်တွင်ထည့်သွင်းအကြောင်းအရာအလိုအလျောက်မိုဃ်းတိမ်ကိုမှကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အလိုတော်ကို backup လုပ်ထားထံမှရယူလိမ့်မည်။ အဆိုပါနို့ထွက် entries တွေကိုဆုံးရှုံးစိုးရိမ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမ။ အရှင်နို့ထွက်ပစ္စည်းအခမဲ့ app ကိုအတူအမှတ်တရများကာကွယ်စောင့်ရှောက်။
• multipurpose အသုံးဝင်မှု: အောက်ပါ Daybook သုံးနိုငျရှိရာအသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားမှုတချို့ရှိနေပါတယ်
- တစ်ဦးမှ-do list ကို app ကိုအမျှ: ဂျာနယ်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူချက်ချင်းမှတ်စုများနှင့်စာရင်းများအောင်နေဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ဖို့စိတ်ကူးများသို့မဟုတ်အတှေးစုစည်းဖို့ကူညီပေးသည်။
- တစ်ဦးက Business ဒိုင်ယာရီနေ့ကစီမံအမျှ: မှတ်စုများရေး, တစ်ဦး task manager ကို app ကိုအဖြစ် daybook သုံးပြီးမှတ်စုအဖြစ်ယာဉ်တင်ပြချက်များအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးပါ။
- တစ်ဦးခရီးစဉ်ဂျာနယ် app ကိုအမျှ: ချောမွေ့စွာတစ်ခုစနစ်တကျထုံးစံ၌ခရီးသွားဓာတ်ပုံများအပါအဝင်ဂျာနယ်သွားလာကျွန်တော်တို့ကို enable ။ ကင်မရာရိုက်ကူးရိုးရှင်းတဲ့ဂျာနယ်အတွက်လျင်မြန်စွာဓါတ်ပုံယူနိုင်ပါတယ်။
- တစ်ဦးနေ့စဉ်စရိတ် tracker အမျှ: နေ့စဉ်သင့်ရဲ့လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ, ဥပဒေကြမ်းများနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာ Organize ။ မှတ်ချက် and save!
ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်အဘို့, အဖြစ်အသုံးပြုရန် - အိမ်စာ tracker, တာဝန် Planner ကရိုးရှင်းပြီးမှတ်စုစာအုပ်, အမြန်ရည်ညွှန်း, ရုပ်ပုံများနှင့်အတူအမြန်မှတ်စုများကို: - တစ် Class ကိုမှတ်စုစာအုပ်အမျှ
- တစ်ဦးဆန္ဒစာရင်း app ကိုအမျှ: တစ်ဦးက Bullet ဂျာနယ်လျင်မြန်စွာဆန္ဒစာရင်းချသတိပြုပါအထောက်အကူ။
ကျနော်တို့ daybook app ကိုများအတွက်လာမည့် updates များကိုများတွင်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များထည့်သွင်းရန်စီစဉ်ထားပါပြီ
- Alexa / google လက်ထောက်အသုံးပြုခြင်း Voice ကို-activated လုပ်ရပ်များနှင့်အတူဒိုင်ယာရီ app ကို
- ဒိုင်ယာရီနေ့စဉ် Mood tracker
- ရှာရန် tags များသို့မဟုတ်တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီး
- ဝေမျှမယ်နှင့် backup လုပ်ထားဘို့သွင်းကုန် Diaro (.zip), Evernote (.enex) နှင့်နေ့တစျခု
ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ! သင်သည်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်, မေးခွန်းများကို, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက DayBook.diary@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအထံမှတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ Daybook မှအောက်ပါအင်္ဂါရပ်များ / အပြောင်းအလဲများကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြ
- ဒိုင်ယာရီရေးသားဖို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ: Daybook ခွန်းမှတ်စု AI အနေဖြင့်စွမ်းအင်သုံး entries တွေကိုစာပို့ဖို့မိန့်ခွန်းအတွက်စံချိန်စကားသံကိုမှတ်စုများကို enable ပါရှိပါတယ်။
- တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့ interface ကိုအတူတစ်ဦးက UI ကို
- နေ့စွဲအပေါ်အခြေခံပြီး Daybook entries တွေကို၏အုပ်စုအသစ်
- ကိုတင်ပို့နိုင်ခြင်း / download, ဒေတာ
ကျနော်တို့ app ကိုတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်မည်ဆို feedbacks ကြိုဆိုနေကြသည်။
Daybook - Diary, ဂျာနယ်, မှတ်စု
6.66 ကို MB
အဆိုပါ 10 အကောင်းဆုံး ...
Diarium - သီးသန့်…
POPdiary - ဒိုင်ယာရီ၊ ဂျာနယ်
ဂျာနယ်က! - ...
ဖုန်းသန့်ရှင်းရေး - ဖုန်းအားဖြည့် & ဘက်ထရီ ...